Iimpawu zePropar-Fumana iimpawu zePropar!
Ungathumela iimveliso zakho kwiPropars kwindawo yakho ye-e-commerce, kwisicelo sakho sobalo.
okanye ungalayisha kakhulu ngeExcel,
Okanye ngePropars, unokwenza lonke ulwazi lwemveliso yakho nganye nganye.
Ungachaza amaxabiso ahlukeneyo kwiiMveliso zakho kwiimarike ezahlukeneyo. Ke, unokusebenzisa umgaqo-nkqubo wexabiso owahlukileyo kwindawo nganye ye-e-yorhwebo.
Ungathumela iinketho zemveliso ezinje ngombala kunye nobukhulu kuzo zonke iimarike ngokuchaza iifoto ezahlukeneyo kunye namaxabiso ahlukeneyo.
Ukuba unendawo yokugcina impahla engaphezulu kwesinye, ungachaza ezi zindlu zokugcina iimpahla kwiiPropar. Isitokhwe saloo ndlu yokugcina kunye neshelufu zihlaziywa ngokuzenzekelayo ukusuka kwindawo yokugcina kunye neshelufu imveliso oyithengisayo ithunyelwa ngenqanawa. Ngale ndlela, unokulandelela ukuba zingaphi iimveliso zakho ezikweyiphi indawo yokugcina impahla.
Ulawulo lweodolo: Unokuba nodibaniso olupheleleyo oluvumela ukuba ubone zonke iiodolo zakho ezivela eTurkey okanye kwiimarike zangaphandle kwiscreen esinye kwiiPropar.
Zonke iinkcukacha zeeodolo zakho; Ungafikelela kulo lonke ulwazi apho umthengi uthenge yeyiphi imveliso kwiscreen esinye.
Unokuprinta iifom zokuhambisa ze-odolo ezingenayo ngokukodwa okanye ngobuninzi.
Ungayibona imali ebuyiswayo kunye nokucinywa kwezicelo kwiindawo zentengiso kwiscreen sePropars.
Ungangqamanisa inkqubo yembuyekezo kunye neeNdawo zeMarike. unokusebenzisa ipolisi.
Susa umqobo wolwimi lwangaphandle ngePropars
Iqela le-Propars likufundisa ngoqeqesho olukhethekileyo ukuba iimveliso zakho zinokuphumelela kweyiphi imarike kunye noluphi uhlobo lweenkcazo zemveliso, iifoto okanye amagama angundoqo.
Iququzelela iintlanganiso ze-intanethi rhoqo ngeengxaki oya kuba nazo kwiimarike kwaye ikuxelela izisombululo.
Ungahambisa zonke iimveliso zakho kwisicelo sakho sobalo kwiPropars.
Ngesicelo osisebenzisayo, ukudityaniswa okupheleleyo kubonelelwa phakathi kweTurkey nakwiimarike zaphesheya.
Zonke iiodolo ezivela kwiimarike zangaphandle nakwiTurkey zongezwa ngokuzenzekelayo kwisicelo sakho sokubala,
Iipropathi zinelayisensi yokudibanisa yabucala evunywe nguMphathiswa Wezimali.
Ungadlulisela iimveliso kwindawo yakho ye-e-yorhwebo kwiPropars ngeXML,
Unokuyivula imveliso yakho oyithengisayo kwiindawo zentengiso ngokwendlela yodidi kwindawo yakho.
Ngohlaziyo oluzenzekelayo, iimveliso ezintsha ezongeziweyo kwindawo yakho zibonakaliswa kwiiPropar, kwaye iivenkile zakho kunye nezitokhwe kwindawo yokuthengisa zihlaziywa.
Unokwenza isitokhwe kunye notshintsho lwamaxabiso ngokugcina indawo yakho ye-e-commerce ihlaziywa. Utshintsho lwexabiso olwenzayo kwindawo yakho lubonakaliswa ngoko nangoko kwindawo yentengiso apho imveliso ithengiswa khona.
Ngesisombululo sePropar e-export, ungathumela ngaphandle kwi-e-yorhwebo indawo yakho.
Iivenkile ezingama-24 eTurkey nakumazwe ahlukeneyo angama-54
Unokulawula kwiscreen esinye ngePropars.